UChofy uzokhipha ingoma entsha | News24
UChofy uzokhipha ingoma entsha
ISITHOMBE:sithunyelweUNks Smangele Mbatha nowaziwa ngelika ‘Dj Chofy’.
UMKLWEBHI wamapuleti wesifazane uNkz Smangele Mbatha owaziwa ngelika-Dj Chofy, uzogubha usuku lwakhe lokuzalwa ngokuthi akhiphe ingoma entsha nathi unethemba lokuthi izoshisa izikhotha.
UDJ Chofy, ohlala e-Pelham, uthe usuku lwakhe lokuzalwa umhla zingama-26 kuNdasa (March) kodwa ingoma yakhe uzoyikhipha kunguLwesihlanu mhla zingama-29 kuNdasa (March).
Isihloko sengoma yakhe sithi Ishampompo (champagne) kanti uzobe ehambisana noSamke owayecula kwenye yezingoma zakhe eseyidlala kumabonakude esihloko esithi Asiyindawo.
Engxoxweni ekhethekile ne-Echo uDJ Chofy uthe uzizwa ejabulile kakhulu ngale ngoma ikakhulukazi ngoba izophuma emuva kwenyanga eyodwa nje kuqale ukudlala ingoma yakhe ethi Asiyindawo kwi-Channel O (channel 320) kanye ne-MTV Base (channel 322) kwi-DStv.
“Le ngoma ikhuluma ikakhulukazi ngala bantu abahamba baye ezindaweni zobumnandi bebe bazi kahle kodwa ukuthi abanayo imali yokuthenga bese bafune ukufika bachuthe abanye abantu.
“Uma ngabe umuntu ezikhiphile eye endaweni yobumnandi okanye ehambe nabangani bakhe into asuke eyifuna ukuthi ayophumula ajabule nabangani bakhe ayi ukuthi achuthwe abantu abasuke emakhaya bezazi ukuthi abanamali vele. Uma ungenamali nje yokuzijabulisa kubalulekile ukuthi uvele uhlale ekhaya ungayi ukuyohlupha abanye abantu abafuna ukuzijabulisa,” kubeka yena.
Uqhube wathi kumthathe usuku olulodwa kuphela nje ukuthi abhale le ngoma kanti usejahe kakhulu ukuthi abantu bayizwe.
“Nginethemba lokuthi abantu bazoyijabulela kakhulu ngoba iyashisa yona. Ngemuva kokuba sengiyikhiphile le ngoma ngizobe sengihambela ezindaweni ezehlukene ngikhangisa ngayo nokuzobe kuyinto yokuqala engizobe ngiyenza seloku ngaqala ukukhipha izingoma zami,” kubeka yena.
UDJ Chofy uthe ingoma yakhe izotholakala online.